Soo bandhigida Abaalmarinta Dhulka Xooggan: Horumarinta Safarka Saaxiibtinimo ee Cimilada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Soo bandhigida Abaalmarinta Dhulka Xooggan: Horumarinta Safarka Saaxiibtinimo ee Cimilada
Awards • Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Abaalmarinta Dhulka Xooggan
SUNx Malta - barnaamij dhaxalgal ah oo loogu talagalay Maurice Strong, Sustainability and Climate activist nus qarni ka hor - kor u qaadida Socdaalka Cimilada Saaxiibtinimo, iyo Les Roches, oo ka mid ah dugsiyada ganacsiga ee martigelinta ugu horreeya adduunka, waxay ku dhawaaqaan Abaalmarinta Dhulka Xoog -sanadeedka oo lagu soo bandhigi doono ShiftIn 'Festifaalka Nofeembar 19.
Tartankaan waxaa loogu talagalay in lagu soo jeediyo farriimaha muhiimka ah ee joogtaynta ee ku jira Axdiga Dunida iyo sidoo kale aragtida Maurice Strong ee dambe.
Waxaa jiri doona 6 abaalmarin oo ah 500 euro midkiiba oo ay ku deeqday Les Roches.
Xukunka waxaa samayn doona koox ka mid ah horyaallada cimilada ee xooggan, oo uu guddoomiye ka yahay Professor Geoffrey Lipman.
Abaalmarinta waxaa loogu talagalay ardayda xiiseyneysa inay mustaqbalka horumariyaan Safarka Saaxiibtinimo ee Cimilada - Kaarboon hoose: SDG ku xiran: Paris 1.5. Waxaa jiri doona 6 abaalmarin oo ah 500 euro midkiiba oo ay ku deeqday Les Roches. Waxaa la siin doonaa 500-eray ee ugu wanaagsan “warqadda fikirka” ee:
"Waa maxay sababta Axdiga Dhulku xitaa hadda uga muhiimsan yahay markii ay soo saareen Maurice Strong iyo Michael Gorbachev 2005. ”
Tartanka waxaa loogu talagalay in lagu soo jeediyo farriimaha muhiimka ah ee joogtaynta ee ku jira Axdiga Dunida, iyo sidoo kale aragtida Maurice Strong ee dambe iyo muhiimaddeeda sii kordhaysa dunida maanta Cimiladu ku xujeysay.
Marxuum Maurice Strong
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan abaalmarinta fadlan tag www.thesunprogram.com
Si aad wax uga barato Axdiga Dhulka, tag www.earthcharter.org
Fadlan ku soo qor cinwaanada [emailka waa la ilaaliyay]. Xukunka waxaa samayn doona koox ka mid ah horyaallada cimilada ee xooggan, oo uu guddoomiye ka yahay Professor Geoffrey Lipman.
Gelitaanku wuxuu furan yahay ilaa Oktoobar 15, 2021.
Professor Geoffrey Lipman, Madaxweynaha SUNx Malta ayaa yiri: “Sida Warbixintii ugu dambeysay ee IPCC ay si weyn u caddeyneyso waxaan ka sii dhamaaneynaa waqtigii aan ku hagaajin lahayn Xiisadda Cimilada ee Xagga ah. Kaliya hoggaamiyeyaasha dhallinyarada ee berri ayaa awoodi doona inay sameeyaan xulashooyinka adag si ay nooga dhigaan inaan gaarno bartilmaameedyada Paris. Cahdiga Dunida, oo uu uuraystay Maurice Strong, ayaa udub dhexaad u ah fahamka Safarka Saaxiibtinimo ee Cimilada iyo adkeysiga hadda loo baahan yahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan iskaashi la yeelano Les Roches, oo ah mid ka mid ah iskuulada ganacsiga martigelinta ugu sarreeya adduunka si aan ugu darno cabbir kale barnaamijkayaga Socdaalka Cimilada Saaxiibtinimo iyo inaan berri u diyaarinno Horyaal Cimilada Xoog leh isbadalka muhiimka ah. ”
SUNx Malta - Shabakad Caalami ah oo Xoog leh - waa nidaam taageero oo daneeyayaasha Safarka iyo Dalxiiska si ay u dhisaan adkeysiga cimilada si waafaqsan bartilmaameedyada Yoolalka Horumarka Joogtada ah (SDG) iyo Heshiiska Paris iyada oo loo marayo Socdaalka Cimilada Saxiibtinimo (CFT). Waxaa maamula Machadka Kobaca Cimilada & Dalxiiska (GGTI) ee aan macaash doonka ahayn ee Midowga Yurub.